Dilkii General Galaal, ma shirqool buu ahaa? | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dilkii General Galaal, ma shirqool buu ahaa?
Dilkii General Galaal, ma shirqool buu ahaa?
General Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) ayaa sheegay in uu shaki weyn ka qabo in maleeshiyada Al Shabaab dishay General Maxamed Nuur Galaal, balse ay dileen Ciidamada Dowladda.
Jananka oo lagu dilay weerarkii Axadii ka dhacay Hotel Afrik ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa masuuliyadda dilkiisa sheegtay Ururka Al Shabaab.
Hase ahaatee General Yuusuf Maxamed Siyaad ayaa ku doodaya inay jiraan calaamado muujinaya in Ciidamada Dowladda ay dilkaasi gaysteen.
“Waxaan tagay jananka meeshii uu ku dhintay, meesha xabaddu uga tiilayna waan la socdaa, arrintaas anigu tuhun badanaa ka qabaa inuu jananka gacanta Shabaab ku baxay.” Ayuu yiri General Yuusuf Maxamed Siyaad.
General Yuusuf Maxamed Siyaad ayaa yiri “Markaan anigu aqoonteeda kaashaday iyo sida wax u dhaceen, waxaan tuhun badan ka qabaa Shabaab gacantooda inuusan ku bixin jananku. Sidaas awgeed waxaan u soo jeedinaya Dowladda Somaliya in arrintaas la baaro oo dad lagu kalsoon yahay oo ehelkiisii, dad wax yaqaana iyo dad dowladda ka socda isugu jira inay arrintaas baaraan.”
General Indhacadde ayaa sheegay in General Galaal uu dagaalamay, markii ay hotelka ay soo weerareen maleeshiyadii Al Shabaab, isla-markaana uu dilay laba nin oo u socotay inay dilaan, balse midda layaabka leh ay tahay in jananka qolkiisa laga helay meydkiisii iyo meydadka labadii nin ee loo soo diray inay dilaan.
“Jananka wuxuu joogay barandada qolkiisa, barandada qolkiisa waxaa la yiilay nin bambo F1 gacanta ku haysta, nin kalena wuxuu yiilay meel u jirta 1 mitir. Ninkan meesha halka mitir u jirtay yaalay kuma uusan dhigin ee waala soo dhigay. Laba sababoodba way cadeynaysaa inuusan meesha ku dhiman oo la soo dhigay, kuma dhiig bixinoo oo wax dhiigga ma yaalin meesha, tan labaad sariirta agteeda la soo dhigay shan farood oo dhiig leh ayaa ku yaalay oo joodarada cuskatay. Saddex qof oo hubeysan oo dagaalamee, odaygana uu qori haysto, maku wada dhiman karaan 2 mitir? kuma wada dhiman karaan weeye.” Ayuu yiri General Indhacadde.
Waxa kaloo uu yiri “General Galaal qolkiisa waxaa laga qaatay inta aan hubo qori uu haystay iyo bastooladiisii.”
General Indhacadde ayaa xusay in kaamirooyinkii hotelka uu lahaa la wada jejebiyay, isagoo intaa ku daray xilligii uu weerarku dhacayay in kaamirooyinku ahaayeen kuwo shaqeynaya.
“Midda kale shakiga weyn waxaa i geliyay dhammaan kaamirooiyiinkii hotelka uu lahaa waala jejebiyay. Kaamirooyinka hotelka way shaqeynayeen markii qaraxu dhacayay, dagaal kasta ha dhaco kaamirada way shaqeyneysay, kaamiradu meel wax laga baaree leedahay.” Ayuu sii raaciyay Indhacadde.
Dowladda Federaalka iyo Saraakiisha Ciidamada ayaan welin ka hadlin eedeymaha xasaasiga ee General Indhacadde uu u jeediyyay Ciidamada Dowladda.
Previous articleShirka Madaxda oo ka socda Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Next articleMadaxweyne Biixi oo saxiixay xilliga doorashooyinka la qabanayo